ओली सरकार आएपछि शेयर बजार तीन वर्ष यताकै न्युन विन्दूमा ! - Dainikee News::
ओली सरकार आएपछि शेयर बजार तीन वर्ष यताकै न्युन विन्दूमा !
काठमाडौं, मंसिर ।
शक्तिशाली सरकार गठन भएदेखि लगातार गिरावट आइरहेको शेयर बजार बुधबार तीन वर्ष यताकै न्यून विन्दूमा पुगेको छ । बुधबार एकैदिन २२ अंकले बजार घटेर नेप्से परिसूचक १११८ विन्दूमा कायम भएको छ, यो २०७२ साल मंसिर महिनाको भन्दा पनि कम हो । तत्कालिन अवस्थामा भूकम्प, भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण शेयर बजार यति कम भएको थिएन ।
शेयर बजार विश्लेषक अनलराज भट्टराई सरकारले आर्थिक नीति चुस्त बनाउन नसक्दा र बैंकहरु नाफामुखी बन्न खोज्दा शेयर बजारमा लगानीकर्तामा मनोबैज्ञानिक त्रास देखिएको बताउँछन् ।
आर्थिक नीतिलाई तत्काल सुधार नगर्ने हो भने यसले भंयकर रुप लिन सक्ने विश्लेषक भट्टराईले विश्लेषण गरे ।
नयाँ सरकार गठनदेखि मुश्किलले एकदुई पटक बढ्नुबाहेक शेयर बजारमा सुधार आएको छैन । पछिल्लो दिन खासगरी बीमा र माइक्रोफाइनान्सको समूहका लगानीकर्ताले बढी गुमाएको देखिन्छ ।
फागुनदेखि अहिलेसम्म एक खर्ब भन्दा बढी लगानीकर्ताले गुमाएका छन् । नेपाल बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याउन वाणिज्य बैंकहरुलाई दिएको निर्दैशन अनुसार प्राय सबै सबै बैंकले उक्त पुँजी पुर्याइसकेका छन् ।
सरकारले नियामक निकायमार्फत कडाईका साथ पुँजी बजार सुधारका योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै लगानीकर्ताको एक समूह आइतबारदेखि नेप्से परिसरमा रिले अनसन बस्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको राजीनामा माग गर्दै उनीहरु अनसनमा बस्ने भएका हुन्।
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर १९, २०७५ /Wednesday, December 5th, 2018, 9:39 pm